Tenzin Wangyala ပျော်ရွှင်မှုအရဆင်းရဲခြင်းမှမည်သို့ပျော်ရွှင်ရမည်နည်း ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Tenzin Wangyal သည်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံဖြစ်သည် bon ဗုဒ္ဓဘာသာ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၁၉၆၁ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံ၏သိမ်းပိုက်မှုကြောင့်သူ၏မိဘများသည်တိဘက်မှထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ ဂေရှေဒphilosophန၏ဆရာဝန်နှင့်ညီမျှ။ သူသည်အတိတ်ကာလ၌ကြီးမားသောဆရာတစ် ဦး ၏ပြန်လည်ဝင်စားခြင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
၁၉၉၁ တွင်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ရန်ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၂၂ တွင် Charlottesville (ဗာဂျီးနီးယား) တွင် Ligmincha Institute ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Es အတော်ကြာခမ်းနားစာအုပ်များ၏စာရေးဆရာအချို့ကိုထုတ်ဝေသူ Pax de Méxicoမှစပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုသည်။ သဘာဝလူများ၏အံ့ဘွယ်သောအမှု; အိပ်မက်နှင့်အိပ်စက်ခြင်း၏ယောဂ; ပုံစံ, စွမ်းအင်နှင့်အလင်းနှင့်အတူအနာရောဂါငြိမ်းစရာ; စိတ်၏စင်ကြယ်သောအနှစ်သာရ; အသံနှင့်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ ...
သူသည်နိုင်ငံများစွာ၌သင်တန်းများနှင့်ဆုတ်ခွာရန်သင်ကြားလေ့ရှိသည်။ ဘာစီလိုနာတွင်သူ၏နေထိုင်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး၊ "စိတ်ဝိညာဉ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး" ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများအပေါ်သူနှင့်အတူစကားပြော။ သူ၏လူတွင်အရှေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအပေါ်သစ္စာရှိမှုနှင့်အနောက်စိတ်ဓာတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုအကြားရှားပါးသောမျှတမှုရှိသည်။
2 Karma ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
- 'ပျော်ရွှင်မှု' ဟူသောမှော်ဆန်သောစကားလုံးရှိပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နောက်ဆုံးမှာပျော်ရွှင်ချင်တယ်။ သို့သော်၎င်းသည်အောင်မြင်ရန်အဘယ်ကြောင့်အလွန်ခဲယဉ်းပြီးဤမျှတိုတောင်းသောကာလအတွက်ကြာရှည်သနည်း။
အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံများကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအတွေးများနှင့်စိတ်ခံစားမှုများဖြစ်ပြီးစွဲလမ်းမှုဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့နှင့်အလွန်အလုပ်များသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနားယူခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုမခံစားရပါ။ မိုးတိမ်တစ်လုံးပြီးနောက်တစ်မျိုးကမင်းကိုတားဆီးလို့မင်းကကောင်းကင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ပြီးတော့အဲဒီကောင်းကင်ကိုခဏတွေ့နိုင်တယ်ဆိုရင်မကြာခင်မှာနောက်ထပ်မိုcloud်းတိမ်တစ်ခုပေါ်လာပြီးထပ်မံဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။
- မသေချာမရေရာမှုများသည်နေရာဒေသအားလုံးတွင်ယနေ့ခေတ်တွင်ဖြစ်လာသည်။ ကျနော်တို့ပြင်ပအကြောင်းတရားများကိုငါသိ၏။ သို့သော်အတွင်းပိုင်းအကြောင်းရင်းများကားအဘယ်နည်း။
- လူသားများသည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေရန်ကြီးစွာသောအဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်။ ဒါပေမယ့်နည်းပညာကမြှင့်တင်ပေးတဲ့ပြင်ပအပြောင်းအလဲတွေကိုကြည့်နေတယ်။ ဒါကစစ်မှန်တဲ့အတွင်းစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုမဟုတ်ပါဘူး။ လူသားများသည်ထိုအမှားကိုသိပြီးတန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုများရှိကြောင်းနှင့်၎င်းသည်နောက်ကျလွန်းခြင်းမရှိဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
- သို့ဖြစ်လျှင် Karma သည်တစ် ဦး ချင်းသာမကဘဲစုပေါင်းမှုရှိပါသလား။
- ဒါပဲ။ အချို့သောအကျိုးဆက်များရှိသည်သောစုပေါင်းအပြုအမူတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရသော်မီဒီယာများသည်အပျက်သဘောဆောင်သောသတင်းများ၊ အကြမ်းဖက်မှုပုံရိပ်များစသည်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ သတင်းကောင်းမဟုတ်ကြောင်းပင်ပြောဆိုကြသည်။ ထိုအရာသည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သော်လူအများကမကောင်းသောသတင်းများ၊ အခြားသူများ၏ကံမကောင်းမှုများကိုထိုနည်းအတိုင်းပိုမိုသက်ဝင်ယုံကြည်လာသကဲ့သို့ဆွဲဆောင်သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အတူကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်းဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
- "Karma" သည်မကြာခဏအသုံးပြုသောစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်အမှန်မှာအဘယ်နည်း။
- စာသားအရ Karma ဆိုသည်မှာလုပ်ဆောင်ချက်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော်လည်းကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်မှာအကြောင်းပြချက်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထို့ကြောင့်အပြုသဘောဆောင်သောလုပ်ရပ်များသည်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုများရှိပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိစေသည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောလုပ်ရပ်များသည်အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပြီးပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့စေသည်။ Karma သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်လက်ရှိအခြေအနေအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်ကလုပ်ရပ်များမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
- သူ၏သွန်သင်မှုများတွင် ၀ ိညာဉ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူရန်ပြောဆိုခြင်းရှိသည်။ ယင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရော၊
၎င်းသည်အသက်၏ရင်းမြစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းရှိအပြင်အပြင်ရှိသဘာဝရှိအင်အားများနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟန်ချက်ညီစေရန်အလေ့အကျင့်များဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းအဆင့်တွင်အလုပ်လုပ်သောအခါစုပေါင်းအဖွဲ့အပေါ်သြဇာသက်ရောက်သည်။ သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အစပြုရန်လိုသည်၊
- ဦး ခေါင်းနှင့်နှလုံးသားအကြားဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်တတ်သည်ဟုအတည်ပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်?
အတ္တအစာကျွေးသောစိတ်၊ စိတ်နှင့်စိတ်သည်မပျော်ရွှင်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်စိတ်သည်လည်းပျော်ရွှင်မှု၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာရွှေကဲ့သို့, လှပသောရုပ်ထုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပစ္စတိုလုပ်နိုင်သောအတူ။ အလေ့အကျင့်များကဲ့သို့ သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း သူတို့ကစိတ်၏အနှစ်သာရကိုမဟုတ်ဘဲ၎င်း၏သာမန်သရုပ်ကိုကြည့်ရှုရန်အစေခံ။ စိတ်၏သဘောသဘာဝကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနက်ရှိုင်းစွာအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောရေကန်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုရေကိုမရွှေ့ပါက၎င်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားနေလိမ့်မည်။ သင်လှုပ်လျှင်မူတိမ်တိုက်ဖြစ်လာသည်။ ခွန်အားသည်ရွေ့လျားမှုမဟုတ်ဘဲငြိမ်သက်ခြင်းရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မေ့လျော့သည်။ အတွင်းပိုင်းဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းလာပြီးပိုမိုအားကောင်းလာပြီးဖန်တီးမှုလည်းပိုဖြစ်လာတယ်။
- ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်အခြား ၀ ိညာဉ်ရေးရာကိုမသိသောမည်သူမဆိုအတွက်ဘ ၀ အတွက်သင်၏အကြံဥာဏ်ကဘာလဲ။
- ကျွန်ုပ်၏အဓိကအကြံဥာဏ်မှာအောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။ သင်၏ဘ ၀ ၌မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအထူးသဖြင့်သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ထက်ကျော်လွန်သောစမ်းသပ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါသင်၏စစ်မှန်သောမိမိကိုယ်ကို၊ ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ခိုလှုံရာတစ်ခုရှိသော်လည်းသင်အပြင်ဘက်တွင်မဟုတ်ဘဲသင့်အတွင်း၌ရှိသည်။
- ကျွန်ုပ်တို့တွင်“ တံခါး” ၃ ခုရှိသည်။ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်တို့ရှိသည်။ သူတို့အားလုံးဟာနာကျင်မှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်၊ ဒါကငါတို့ကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကသူတို့ကို ၀ င်ဖို့မဟုတ်ဘဲစွန့်ခွာရန်၊
အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပါကသင်၏မျက်လုံးများကိုခေတ္တပိတ်ထားပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငြိမ်သက်မှုကိုခံစားပါ။ ထို့နောက်သင်ကိုယ်တိုင်အကန့်အသတ်မရှိနေရာရှာနိုင်သည်။ ၎င်းကို“ အမေ”၊ “ အနှစ်သာရ”၊ “ မြင့်မြတ်သော” ဟူ၍ ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ အရေးမကြီးပါ။ ထိုတွင်ရှိသည်။ သင်တွေ့ရှိသောအခါ၎င်းသည်ကလေးဆုံးရှုံးသောအခါရုတ်တရက်မိခင်ကိုတွေ့သောအခါနှင့်တူသည်။ မိမိကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးပြီးတစ်ဖန်ပြန်တွေ့သူတစ် ဦး ကဲ့သို့။ အိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ် ထိုအခြိနျတှငျသငျသညျအပြည့်အဝယုံကွညျစိတျခလြိုငျ၊ ၎င်းသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
- ဒုတိယ“ တံခါး” သည်စကားလုံး၊ မိန့်ခွန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေးများစွာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ခေါင်း၌တုန်ခါနေပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြောနေသည့်အသံများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုအသံများတိတ်ဆိတ်စွာမရပ်တန့်ပါကသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်စစ်မှန်သောဆက်နွယ်မှုကိုမခံစားရနိုင်သည့်အပြင်အတွင်းပိုင်းတိတ်ဆိတ်မှုကိုလည်းနားထောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေးများ၏ဆူညံသံကိုကြားရပြီးသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံကြသည်။ ငါတို့တိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်းကိုတားဆီးသောအသံများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့တိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်ရန်နှင့်နားထောင်ရန်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါသင်, ငြိမ်းချမ်းရေး, တီထွင်ဖန်တီးမှုခံစားရသည်။ ထို့နောက်သင်သည်အတွင်းပိုင်း၏ဉာဏ်ပညာအသံများကိုကြားနိုင်သည်။
သင်၏အကြံအစည်များကိုမယုံပါနှင့်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်လေ့လာခြင်း၊ စေ့စေ့စပ်စပ်ပြောဆိုခြင်း၊ မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ အဓိကအချက်မှာပင်ကိုယ်သိစိတ်များသည်နောက်ဆုံး၌ပိုမိုထိရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တိတ်ဆိတ်စွာတွေးခေါ်သံများထက်စာတိုများပိုများနေသည်။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်ရန်သင်ယူဖို့ရှိသည်။
- တတိယတံခါးကစိတ်ပဲ။ ဒါပေမယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်တော့စိတ်ဟာရုပ်ဝတ္ထုတစ်ခုအနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ရူပဗေဒပညာရှင်များ၏အဆိုအရစကြာ ၀ universeာသည်အချည်းနှီးသောနေရာဖြစ်သည်။ ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာလည်းနေရာမရှိဘူး။ နှလုံးသားကိုဂရုပြုပြီးအရာအားလုံးကိုမွေးဖွားပေးသောအရင်းအမြစ်သည်ထိုနေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် medicina ငါအကြံပြုချက် ၃ ခုမှာငြိမ်သက်မှုအဖြူရောင်၊ တိတ်ဆိတ်မှုအနီရောင်နှင့်ကျယ်ဝန်းမှုအပြာတို့ပါဝင်သည်။ သင်ဤဆေးသုံးလုံးကိုသောက်သောအခါ“ အတွင်းပိုင်းခိုလှုံရာ” ဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သောအရာကိုသင်တွေ့ရှိရပြီးသင်ကာကွယ်မှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုကိုခံစားရပြီးဖြေရှင်းနည်းများကိုသင်ရှာဖွေသည်။ ပြီးတော့ဒီဟာကဘယ်သူ့အတွက်မဆိုလုပ်ပေးနိုင်လို့ပါ။
- ငါတို့ရှိသမျှသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေနေသည်။ ကျနော်တို့ကပေးချင်တယ်။ ဒီကိစ်စမှာခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ
ငါတို့ပြောခဲ့သည့်အတွင်းပိုင်းအာကာသထဲတွင်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတွေ့ရသည်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောဆန္ဒသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ "I love you" ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မုန်းတီးမှုမရှိသောအတိုင်းအဆမဲ့အကြွင်းမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိမ်တိုက်များကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူတို့၏ရင်ခွင်၌နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောကောင်းကင်ပြာနှင့်တူသည် မိုess်းတိမ်သည်ပေါ်လာပြီးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အာကာသအတွင်း၌ရှိသောအရာကိုသင့်လျော်သောမထားဘူး။ ထိုနည်းတူစွာပင်အတွင်းပိုင်းအာကာသသည်အကြီးမြတ်ဆုံးပရိုဆက်ဆာသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောအတွေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောဆန့်ကျင်ဘက်စိတ်ခံစားမှုများကိုရှင်းလင်းစေသည်။
- သေခြင်းနှင့်ဘာမှမမှားပါ ဒါဟာမွေးကတည်းကပုံမှန်အရာဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမလိုမုန်းထားစိတ်မရှိဘဲကြည့်လျှင်၎င်းသည်အိပ်ငိုက်နေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနုတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ၄၉ ရက်အကြာတွင်သင်သည်မွေးဖွားခြင်းခံရသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ မင်းဟာအတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်မင်းဟာအဖိုးတန်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်လူသားဖြစ်သည်။ ဒီအဖြေကမသေနိုင်တဲ့အရာ၊ မသေနိုင်တဲ့အရာ၊ အာကာသနဲ့ထပ်မံချိတ်ဆက်နေတယ်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပေမဲ့သင်ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမခံစားရ၊ ၎င်းကိုသင်အမှန်တကယ်တွေ့ကြုံခံစားရပါကသေခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးသည်လည်းပြောင်းလဲသွားသည်။ သင်မသေတော့မည်ကိုသင်သိသည်။
ဒန်နီယမ်ဘောနက်။ တူညီသောဘာသာပြန်ချက်: Belén Giner ။ မဂ္ဂဇင်း ခန္ဓာကိုယ်စိတ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » အတွေ့အကြုံများ » Tenzin Wangyal ၏အဆိုအရဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရခြင်းမှပျော်ရွှင်မှုသို့မည်သို့သွားရမည်နည်း
Nusve Modigliani ဟုသူကပြောသည်
Nusve Modigliani အားစာပြန်ပါ
Grace Angle ဟုသူကပြောသည်
Graciela Angulo အားပြန်ပြောပါ
Mauricio Perez ဟုသူကပြောသည်
ဒေါသထွက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ စိတ်အေးအေးထားဖို့အကြံဥာဏ် ၁၅ ခု